अझै बढ्नसक्छ सुनको भाउ, प्रतितोला ७० हजारसम्म पुग्ने प्रक्षेपण ! « GDP Nepal
अझै बढ्नसक्छ सुनको भाउ, प्रतितोला ७० हजारसम्म पुग्ने प्रक्षेपण !
Published On : 26 June, 2019 7:46 am
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको भाउले नयाँ रेकर्ड बनायो, प्रतितोला– ६५ हजार ५ सय रुपैयाँ । दुई सातादेखि लगातार बढिरहेको सुनको मूल्यले नयाँ उचाइ चुम्ने क्रम भने अझै रोकिनेवाला देखिँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार सुनको भाउ तोलामै ७० हजारसम्म पुग्नसक्ने देखिन्छ । अर्थात् मंगलबार प्रतिऔंस १४३५ डलर रहेको सुनको भाउ केही दिनमै १५०० डलरसम्म पुग्नसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरुको यो प्रक्षेपण सही भएमा नेपाली बजारमा पनि सुनको भाउ प्रतितोला ७० हजारसम्म पुग्नसक्छ ।
तर, सुनको मूल्य स्थिर भने हुँदैन । उपयुक्त समयमा किनबेच गर्नेले मात्रै यसमा नाफा कमाउन सक्छन् । यसअघि यसअघि २०७० भदौ १२ मा पनि सुनको मूल्य तोलाकै ६३ हजार ३ सय पुगेको थियो । तर, २०७० पछि लामो समय सुनको भाउ प्रतितोला ५० हजार आसपास घुमिरह्यो । २०७५ फागुन ८ मा भने फेरि ६३ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको थियो ।
यसरी अमेरिकाको विभिन्न मुलुकसँगको सम्बन्ध चिसिँदा सेयर बजार र डलरको मूल्यमा पर्ने प्रभावसँगै सुनको मूल्यमा उतारचढाव आउने गर्दछ ।
लगानीकर्ताले सेयरमा लगानीको विकल्पका रुपमा सुनमा लगानी गर्न खोज्दा मूल्य बढ्छ भने फेरि सेयर बजारमै फर्किंदा सुनको मूल्यमा गिरावट आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको कारोबार उपभोग्य वस्तुका रुपमा नभइ कमोडिटि मार्केटमा हुने गरेको छ । यसैले सुनको उत्पादनभन्दा अन्य कारणले मूल्य घटबढ हुन्छ ।
यसपटक भने अमेरिका र इरानबीचको युद्धका कारण लगानीकर्ता सुनमा आकर्षित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको असर स्थानीय बजारमा स्वतः परेको हो । मूल्य बढेकाले बजारमा सुनको माग एकदम न्यून रहेको बताइन्छ ।
बजारमा नयाँ गहना किन्नेभन्दा पनि पुराना गहना बेच्नेको भीडभाड धेरै देखिन्छ ।